Akụkọ banyere Delta Injinịa: ihe omume, ememme, akwụkwọ akụkọ
Onwere ihe ohuru ohuru igwaputa na Delta Engineering. Ma ọ bụ mmepe ọhụụ ma ọ bụ nkwalite n’elu igwe dị ugbu a na ndị ahịa anyị na-arụkọ ọrụ.
You chọrọ ịbụ ihe ọhụrụ? Họrọ otu n’ime isiokwu dị n’okpuru maka ihe ọmụma zuru ezu:
Delta Injinịa na mgbasa ozi
omume Soro Delta Engineering na ụlọ ọrụ ahụ Ụlọ ọrụ ASB in Atlanta, GA
AFỌ 24-25-26 Mee 2022
Kedu? N'oge ASB Open House a, igwe Delta Engineering ga-arụ ọrụ ma jikọta ya na igwe na-akpụzi ASB yana ngwa inyeaka. Lelee atụmatụ na igwe dị iche iche na-arụ ọrụ na akwụkwọ agbakwunyere.
Usoro a bụ otu ụbọchị kwa ụbọchị yana dịka akụkụ nke ndebanye aha ị ga-enwe ike igosipụta ụbọchị masịrị gị, nke a ga-ekwenye ma emesịa dabere na ọ dị.
Nwere mmasị? Debanye aha Ebe a ozugbo enwere ike, ebe ọnụọgụ oghere kwa ụbọchị nwere oke.
Ọnọdụ Ụlọ Ọrụ Nkwado Nka na ụzụ ASB dị na Atlanta, GA
Ọdịnaya echedoro, biko banye
Biko banye / debanye aha iji hụ ọdịnaya a
ASLỌ ỌR CO PLASMA
Igwe mkpuchi Plasma DELTA
Plasma mkpuchi, nke ejirila ogologo oge mee ihe maka ị ofụ karama mmanya, ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ ọ softụ softụ dị nro. Usoro a, enwere ike iji meziwanye ihe mgbochi gas nke karama PET, na-enyekwa uru mgbe ọ na-abịa n'ichepụta ngwaahịa HDPE na nnukwu akpa.
Plasma bụ otu n’ime steeti anọ nke okwu, yana ihe siri ike, mmiri mmiri na gas. Igwe ihe nkpuchi ohuru nke Delta Engineering choputara ihe omumu ihe omimi nke Plasma (PECVD).
Uru Plasma mkpuchi
Plasma mkpuchi bụ ihe ọzọ nwere ike ịgbanwe na teknụzụ multilayer, na-enye ọtụtụ uru. E jiri ya na teknụzụ multilayer, ọ na-abawanye uru ma na-adigide site na ọnọdụ gburugburu ebe obibi.
Teknụzụ mkpuchi na-eme ka imezigharị dịkwuo mma ma dị irè, nzọụkwụ dị mkpa maka akụ na ụba okirikiri.
Pịa Ebe a gụọ akụkọ.
UDK450 INWEGRATAT IN 1 BLOW 2LO MACHINE
Nnukwu nke Delta Engineering nke UDK 450 na-achọpụta nchọpụta usoro dị n'etiti igwe ahụ. Sistemu nhọrọ na - eji sistemụ igwe eletriki, igwe anaghị arụ ọrụ ngwa ngwa ịchọpụta ma jụ arịa jiri microcracks.
Ego na ndoputa oghere. Orkụnye sistemụ na-achọpụta ihe n'ime igwe ahụ na-azọpụta ohere ma di ọnụ karịa ịzụta sistemu iche.
Ndị ọrụ DELTA SPRAY COATING UNIT
Budata akuko biputere dika PDF-document
Spraylọ akwa Delta Engineering na-etinyere akwa mkpuchi na karama iji dozie ọtụtụ okwu na-emetụtakarị karama PET n'ahịrị. Karama na-abanye na ebu, mgbe ahụ, ọ na-ejide ya na njikwa mgbochi na-egbochi ya tupu a kpọghachiri ọkpọ nkụ ahụ na-ebugharị na-ebugharị igwe ahụ na ọnụego 8,000 karama kwa elekere.
Kedu nke pụtara ọhụrụ?
Igwe ahụ, nke na-eme ka ọ bụrụ mpụta amị nke North America na NPE2018.
Ọdịmma ngwaahịa na arụmọrụ dị nro karịa. Karama nke onye na-ahụ maka mkpuchi na-eyikarị ka ọ ga-adọtakarị n'etiti usoro nduzi, nwee mma na-enwu enyo, akara ngosi scuff na-adịchaghị mma. Ndị ọrụ nwere ike ịme ndozi ọsọ ọsọ na mfe ịnabata ụdị karama dị iche iche. Ọzọkwa, usoro ịgba ọhụrụ nke igwe ahụ dị mma, na-ebelata oriri mkpuchi.
Injinịa ahịa anyị Danny Stevens bụkwa onye ọbịa ọbịa: mkpuchi Plasma - ọmụmụ ihe gbasara ndị ahịa
(Tuzdee 12 Ọktoba n'elekere 4.30:XNUMX nke ehihie)
AFỌ 11th - 13th October 2021
Ebe ihe ngosi Ụlọ ntu #49
Ọnọdụ Ogige Crowne Plaza Atlanta na Ravinia | Atlanta, GA - United States
Official website https://www.blowmoldingdivision.org/abc-2021-overview
Consul General nke Belgium na Atlanta gara Delta Engineering Inc
Ighaghachite ihe omume Delta Injinịa na NPE
AFỌ 7 - 11th Ka 2018
Ebe ihe ngosi S18058
Address Orlando, Florida, Njikota Obodo Amerika
Ndị nnọchi anya Belgium na ọfịs anyị sitere na Atlanta